AMERICAN PIT BULL TERRIER IYO DAGAALYAHAN MAREYKAN AH - EEYAHA
Guri Mareykan Bull Terrier (bidix) oo uu kariyay John Errington. Cagajugle Mareykan ah (midig) oo ay cuneen Ruthless Kennels.
Dadku badanaa way isku qaldaan Godka Dibida Maraykanka leh Godka Xoogsheegashada Mareykanka . Cagajugleynta Mareykanka ayaa caan ka noqoneysa Mareykanka dadka badidoodana waxay isugu soo xooriyeen iyagoo isku mid ah marka ay jiraan kala duwanaansho cad oo xitaa qofka celceliska ah uu tilmaami karo haddii ay iyaga wax yar oo macluumaad ah ka hayaan.
The Dagaalyahan Mareykan ah waxaa lagu bilaabay isgoyska Godka Dibida Maraykanka eyda kale eey kujiraan qoyska cagajuglaynta ah mararka qaarkoodna eeyo ka baxsan reerka xoog sheegashada ah. Cagajugleynta Mareykanku waxay noqoneysaa isirkeeda, mana aha nooc la mid ah American Pit Bull Terrier (APBT).
Dhinaca bidix waxaa ku yaal Spencer sanka buluugga ah ee loo yaqaan 'American Pit Bull Terrrier' dhanka midigna waxaa ku yaal Mia oo 13-wiig jir ah sanka buluuga ah ee Mareykan Bully Pit ah.
Hal farqi oo aad u cad ayaa ah muuqaalka. Cagajuglaynta Mareykanku waa murqo aad u ballaadhan badanaana leh madax waaweyn iyo lugaha gaagaaban. Dibida Mareykanka ee loo yaqaan 'God Pull Bulls' uma eka muruq iyo balac intaba.
Bulls Bulls waa eeyo dhexdhexaad ah oo culeyskoodu yahay 30 ilaa 70 rodol waxayna istaagaan qiyaastii 18 illaa 22 inji oo garbaha ah, halka Bulalka Ameerika ay u egyihiin 50 illaa 120 rodol. Labada noocba miisaanka iyo dhererka dhabta ahi way ka muhiimad yar yihiin saamiga u dhexeeya miisaanka iyo dhererka. Miisaanka iyo dhererku way ku kala duwan yihiin labada noocba, laakiin hadafka Bully American-ka inuu noqdo muruq iyo waasic leh madax weyn ayaa weli ah farqi cad.
Waa kuwan tusaalooyin ...
Tusaalooyinka Cagajugleynta Mareykanka
Dadka waaweyn ee Mareykanka u cagajugleeya, waxaa iska leh sawir Corleone Kennels
Skylar, Cagajugle Mareykan ah, waxaa iska leh aaladda Down South Smokin 'Kennels
Tusaalooyinka Argagaxisada Godka Mareykanka
Chevy waa haweeney Mareykan ah oo loo yaqaan 'Bull Bull' oo halkaan lagu muujiyey iyadoo 3 sano jir ah
Tokey, oo loo yaqaan 'God Pull Bull Terrier' oo jira 7 sano
Zeppelin Maraakiibta Mareykanka ee Bull Terrier ee 2 sano jir ah
Tigger the American Pit Bull Terrier at 20 bilood, miisaankiisu yahay 60 rodol
Kani waa Khatar sanka 6 1/2 ee sanka gaduudka Bull / American Bully. Hooyadiis waxay ahayd Amerikaan Mareykan ah eyga ciyaarta aabihiisna waa Bully American. Dad badan ayaa u maleynaya in ereyga eeygu macnihiisu yahay eey dagaallamaya, marka dhab ahaantii ay tahay erey eey shaqeynaya. Wax badan oo ka mid ah nooca ugaarsiga noocyada iyo ter Territoryaasha shaqeeya waxay adeegsadaan ereyga ereyga si ay u sharxaan eeyaha shaqeeya. Ciyaarta waxaa loola jeedaa nooca eyga shaqeyn doona ilaa uu hoos udhaco, waligiis isma dhiibto, adkeysto diyaarna wuu u yahay wax walbana.
Khatar ku ah isku-darka sanka guduudan ee 6 1/2 sano jir / Isku-darka Bully American
Sawirka Godka Bull Terrier Sawirada 4
Sawirka Godka Dibida Mareykanka 8
Liistada Khadka Bullka Mareykanka ee kala duwan iyo Dhiigga Mareykanka ee Bully
Euthanasia qasabka ah ee Godka Bull Terme
min pin iskudhafka greyhound talyaaniga
somali mastiff rottweiler mix puppy ee iib ah
maxay ka dhigan tahay marka eeygaagu ku duqo
sawirada adhijir Jarmal ah